ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော hypersexuality ရှိအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအပေါ်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
ဦးနှောက်။ 2013 ဇန်နဝါရီ 31 ။
Politis M က, ချေးငွေများကို C, ဝူ K သည်, O'Sullivan အက်စ်အက်စ်, Woodhead Z ကို, Kiferle L ကို, လောရင့်အေဒီ, Lees AJ, Piccini P ကို.
ရင်းမြစ်: ဦးနှောက်သိပ္ပံဌာနခွဲ, ဆေးပညာဌာန, Hammersmith ဆေးရုံ, Imperial College London မှ, လန်ဒန် W12 0NN, ဗြိတိန်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ Hypersexuality ပါကင်ဆန်ရောဂါလက်ခံရရှိ dopamine အစားထိုးကုထုံးတွေနဲ့လူနာတွေအတွက်ရောဂါ၏သိသာထင်ရှားသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုလေ့လာခဲ့ကြ, ကျနော်တို့ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် hypersexuality ၏ pathophysiology အကြောင်းကိုအတော်လေးနည်းနည်းသိကခေတ်ရေစီးကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအတွက်လိင်၏ပုံဖော်ခြင်းနှင့်ဆင်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပေါ်နိုင် individuals.Here အတွက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုအမြင်မသိနိုင်ပါဘူး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြားဆုလာဘ်-related နှင့်ကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးမှတက်ရောက်လာသူများကိုဖော်ထုတ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု. hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူ 12 လူနာအုပ်စုတစ်စု။ ကျနော်တို့အမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့ dopaminergically လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွဆက်စပ်ဒေသများအတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုကိုက်ညီတဲ့မယ်လို့ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုတွေးဆ။
hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာ ON နှင့် OFF dopamine မူးယစ်ဆေးဝါးများ scan ဖတ်ခဲ့ကြသည်, သူတို့၏ရလဒ်များကို hypersexuality သို့မဟုတ်အခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်းမရှိဘဲ 12 ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာအုပ်စုတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့သိသိသာသာပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်ပါကင်ဆန်ရောဂါ hypersexuality အုပ်စုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ hedonic တုံ့ပြန်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများသိသာအသွေးတော်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို signal ကိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ limbic, paralimbic, ယာယီ, occipital, somatosensory နှင့် prefrontal cortical အတွင်းဒေသများတွင်အပြောင်းအလဲသိမြင်မှု, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, အမြင်အာရုံနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များမှစာအဆက်အသွယ်။
အဆိုပါအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အချက်အလက်များကို hypersexuality လူနာ '' တိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးမြှင်အဆိုပါ ventral striatum အတွက် Active နှင့် cingulate နှင့် orbitofrontal cortical ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းပြသ။ W ကhypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာဆေးဝါး OFF ခဲ့ကြသည်ကြက်, အအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်ဒေတာ res မှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုများ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်း activation အတွက်လျှောက်လျော့နည်းပြသt.
လူနာဆေးဝါး ON ခဲ့ကြသည့်အခါဤအ Deactivate လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်, dopamine မူးယစ်ဆေးဝါးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ၎င်းနှောက် cortex အတွက်ဒေသခံအာရုံခံဆားကစ်အတွင်းတားစီးဖြန့်ချိခြင်းအလိုငှါအကြံပြုခြင်း.
ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်အားနည်းချက်လူနာများ၏ဤအုပ်စုတွင်ကြီးကျယ်သောလူမှုရေးအကျိုးဆက်များနှင့်ရံဖန်ရံခါ, ချုပ်နှောင်ထားစာကြောင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်လိင်စိတ်တိုးမြှင့်အတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာမှထိတွေ့မှုကနေတစ်ဆင့် cue ထိတွေ့မှု၏အလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူသက်ရောက်မှုရှိသည်။
hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံတွေကိုထိတွေ့မှတဆင့် stimulation နှောက် cortex ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် Deactivate မှတဆင့်ဒီဆုလာဘ်အပြုအမူရှာကြံများအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးတွန်းအားပေးစွမ်းသည်။
hypersexuality နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပါအဝင် Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန် (ပါကင်ဆန်ရောဂါလက်ခံရရှိ dopamine အစားထိုးကုထုံးတွေနဲ့လူနာတွေအတွက်ရောဂါ၏သိသာထင်ရှားသောအရင်းအမြစ်များမှာWeintraub et al ။, 2006; အီဗန် et al ။, 2009; Voon et al ။, 2009) ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ Hypersexuality လေ့ (, ပြည့်တန်ဆာသို့သွားရောက်ခြင်းနှင့်အတူကရာ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေညစ်ညမ်းအကျိုးစီးပွားတိုးတက်နှင့်အချို့သော premorbidly predisposed တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, paraphillias မှတစ်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်ကနေလိင်အဘို့အလွန်အကျွံတောင်းဆိုမှုနှင့်အတူဥပမာ sadism, bestiality, transvestitism တငျပွ; Quinn et al ။, 1983; Voon et al ။, 2006) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် hypersexuality ၏ပျံ့နှံ့အထီး hypersexuality ရောဂါရှိသည်ဟုအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ dopamine agonist ကုထုံးကိုလက်ခံရရှိလူနာတစ်ဦးကြီးများလေ့လာမှု (ထဲမှာ ~3.5% ခဲ့သည်Weintraub et al ။, 2010) ။ တစ်ဦးကအသစ်များပေမယ့်သေးငယ်လေ့လာမှုပါကင်ဆန် 7% ၏ရောဂါနှင့်အတူ link တစ်ခုအတွက် hypersexuality တစ်အတန်ငယ်မြင့်မားတဲ့ပျံ့နှံ့အကြံပြုထားပါတယ် l-DOPA (ခေါင်းဆောင် Hassan et al ။, 2011) ။ အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများကိုလည်းအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပြသကြ l-DOPA နှင့် hypersexuality (Ballivet et al ။, 1973; ညိုသော et al ။, 1978; Uitti et al ။, 1989).
မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်အထွေထွေအများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်လာသည်နှင့်ညစ်ညမ်းအင်တာနက်အပေါ်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှစဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှု dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးတချို့အခြေခံဥပဒေအရအားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်နှင့်အတူအလွန်အကျွံလူမှုရေးအရလက်မခံနိုင်အတွက်အဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ကြောင်းကိုအခိုင်အမာထားပြီးRees et al ။, 2007) ။ မျောက်လေ့လာစရာများ (dopamine မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအကြားများ၏ညှိနှိုင်းအပြန်အလှန်သိသိသာသာအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းညွှန်ပြPomerantz, 1990) ။ '' လို 'ဆိုတဲ့ mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တွေကို (၏ရှေ့မှောက်တွင်၏လက်ရှိပြည်နယ်အကြားများ၏ညှိနှိုင်းအပြန်အလှန်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်အဖြစ်အလွန်အမင်းဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိတွေကိုအရေးပါမှု, မက်လုံးပေး salience သီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Zhang က et al ။, 2009; Berridge, 2012).
ပေ (Redouté et al ။, 2000) နှင့် functional MRI (Arnow et al ။, 2002; Hamann et al ။, 2004; Walter et al ။, 2008) ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့၏လေ့လာမှုများ ventral striatum, hypothalamus, amygdala, cingulate နှင့် orbitofrontal cortex အပါအဝင်ဒေသအတော်များများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အမြင်အာရုံအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ဟုပြသခဲ့ကြသည်။ လတ်တလောလေ့လာမှုမှာတော့ striatal dopamine လွှတ်ရာပေနှင့်သွယ်ဝိုက်အစီအမံကိုအသုံးပြုပြီး, တကပါကင်ဆန်နှင့်အတူလူနာရောဂါချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ (ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာအုပ်စုတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆုလာဘ်-related အမြင်အာရုံ cue ထိတွေ့အောက်ပါ သာ. ကြီးမြတ် ventral striatum dopamine လွှတ်ပေးရန်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်O'Sullivan et al ။, 2011) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် ventral striatum-ဆက်စပ်ဖို့ dopamine စီမံကိန်းများတွင်တိုးတက်သော neuroadaptations ၏ရလဒ်အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဆုလာဘ်ရှာဆုလာဘ်နှင့်၎င်းတို့၏တွေကိုအဘို့အမက်လုံးပေး salience (သို့မဟုတ် 'လို') ၏အလွန်အကျွံထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းအဆိုတင်သွင်းသောမက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ, နှင့်အညီခဲ့ လှုံ့ဆျောမှု circuitry (Berridge et al ။, 2009).
စမ်းသပ်လေ့လာမှုများသော dopaminergic အာရုံကြောထိုကဲ့သို့သော ventral striatum အဖြစ်ဒေသများရှိ circuitries, hypothalamus, amygdala နှင့် medial prefrontal cortex (အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတုန့်ပြန်, လိင်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်လိုက်စားတစ်ကဏ္ဍမှပါပြသကြPfaus, 2010; Stolzenberg နှင့် Numan, 2011) ။ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်အသိမြှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးအပါအဝင်ပင်ကိုသဘာဝဆုလာဘ်, (လိုက်ရှာမြှင့်တင်ရန်ပြသထားသည်Fiorino နှင့် Phillips က, 1999; Nocjar နှင့် Panksepp, 2002; Afonso et al ။, 2009), တွေကိုဆုချမှအလွန်အကျွံမက်လုံးပေး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ (မူးယစ်ဆေးဝါးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မည့်အလားအလာက်ဘ်ဆိုက်များဖော်ထုတ်သည် ventral striatum, amygdala, hypothalamus နှင့် anterior cingulate cortex အတွက်အာရုံခံ၏လူဦးရေ coactivateFrohmader et al ။, 2010; ကိုင်စရာ et al ။, 2010).
အဆိုပါမက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီနှင့်အညီ, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် cue reactivity ကိုချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တိုးချဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်း, ဤ Active dopaminergic ဆေးခွငျးအားဖွငျ့ potentiated နိုငျသညျ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် modulated နှင့်မြှင့်တင်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆက်စပ်လိမ့်မယ်လို့ထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ဆက်စပ်သည်ဤဒေသများတွင်ထစ်အငေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုပြသမယ်လို့တွေးဆ။ ကျနော်တို့အသွေးတော်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) ဆန်းစစ်ဖွငျ့ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI နှင့်အတူ signal ကိုပြောင်းလဲဆည်းကပ် (တစ်ဦးအပေါ်ဆေးဝါးအတွက်တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦး OFF ဆေးဝါးစကင်နှင့်အတူ scan) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အမူအကျင့်အကဲဖြတ်အတူပုံရိပ်ရလဒ်များကိုပတျသကျ။
idiopathic ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူနှစ်ဆယ်လေးပါး Non-demented လူနာကိုလေ့လာခဲ့ကြ (ဇယား 1 နှင့် 2) ။ hypersexuality ဤမပြည့်စုံအဆိုပြုထားလုပ်ငန်းလည်ပတ်အဖြေရှာတဲ့စံ (ဆယ်နှစ်Voon et al ။, 2006; နောက်ဆက်တွဲဇယား 1) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူအခြား 12 လူနာ hypersexuality သို့မဟုတ်အခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်မရှိသမိုင်းရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Frohmader et al ။ (2011) တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှု dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏တစ်ပြိုင်တည်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အလားတူပင်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ဆေးသွေးဆောင် hypersexuality သာထပ်ခါတလဲလဲဆေးဝါးအသုံးပြုမှုများ၏အခြေအနေတွင်ဖွံ့ဖြိုးနှင့် acute ဖြစ်ပေါ်ပါဘူး က de Novo လူနာများ (Giladi et al ။, 2007) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူဆေးလူနာတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စု hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
သင်တန်းသားများကို '' လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
ဘာသာရပ်များအရေအတွက် 12 12
အသက်အရွယ် (SD က±နှစ်) 55.2 ± 9.2 62.3 ± 9.7 0.077 b
လိင် 11 M / 1 က F 10 M /2က F
ရောဂါကြာချိန် (SD က±နှစ်) 9.6 ± 5.2 10.1 ± 6.4 0.85b
UPDRS OFF မော်တာအပိုင်း (III ကို) ရမှတ် (SD က±ဆိုလို)a 40.2 ± 10.1 34.9 ± 9.9 0.21b
မော်တာအပိုင်း (III ကို) ON UPDRS ဂိုးသွင်းနှင့်% တိုးတက်မှု (SD က±ဆိုလို)a 23.1 ± 8.2 (43.8 ± 9.7%) 20.0 ± 5.5 (41.4 ± 11.7%) 0.29 (0.59)b
mini-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်စာမေးပွဲ (SD က±ဆိုလို) 29.8 ± 0.4 28.9 ± 2.2 0.30c
နေ့စဉ် LEDစုစုပေါင်း (SD က± mg) 600 ± 327 778 ± 278 0.17b
နေ့စဉ် LEDL-DOPA (SD က± mg) 288 ± 326 646 ± 264 c
နေ့စဉ် LEDDA (SD က± mg) 311 ± 183 132 ± 143 c
Unpaired ခ t-test ။
က c မန်း-Whitney စမ်းသပ်။
ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာ hypersexuality သို့မဟုတ်အခြားထကြွလွယ်သော-compulsive အပြုအမူတွေမရှိဘဲပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူ = လူနာ; M က = အထီး, F ကို = အမျိုးသမီး; SD က = စံသွေဖည်; UPDRS = ပါကင်ဆန်ရောဂါခဲ့သည် Rating စကေး Unified; LED = levodopa ညီမျှ။ ဆေးထိုး (ယခင်အစီရင်ခံစာမှအလားတူတွက်ချက်Politis et al ။, 2010): LED (မီလီဂရမ်) = (1 × = levodopa) + (0.77 levodopa CR ×) + (1.43 levodopa + entacapone ×) + (1.11 levodopa CR + entacapone ×) + (20 ropinirole ×) + (20 ropinirole ER ×) + (100 pramipexole ×) + (30 rotigotine ×) + (10 × bromocriptine) + (8 apomorphine ×) + (100 × pergolide) + (67 cabergoline ×) levodopa / carbidopa သို့မဟုတ် benserazide Hydrochloride အတွက်ပုံသေနည်း LED သာ levodopa ဖြစ်ပါသည် တွက်ချက်။
HS1 M 46 ညစ်ညမ်း / အထပ်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ရမ္မက်မြားတှငျပါဝငျခွငျး CS Cabergoline 280 0
HS2 M 65 သူကပုံမှန်အားဖြင့် / sex အကြောင်း obsessing အလွန်အကျွံအချိန်သုံးစွဲပေါင်းသင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတို့နှင့်အတူလိင် Pramipexole 267 0
HS3 M 72 သူကပုံမှန်အားဖြင့်တွဲဖက်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတို့နှင့်အတူလိင် Ropinerole, levodopa 180 700
HS4 M 65 အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူဗလာရေးရာ / ပါဝင်ပတ်သက်မှု Pramipexole 200 0
HS5 M 50 လူနာထုတ်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည် , CS BE Ropinerole, levodopa 180 800
HS6 F 55 တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု CS Pramipexole 200 0
HS7 M 53 ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း Pramipexole, levodopa 240 260
HS8 M 53 အချည်းနှီးသောရေးရာ / obsessive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး PG, BE, CS Ropinerole 360 0
HS9 M 60 လူနာထုတ်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည် , CS BE Ropinerole, levodopa 300 600
HS10 M 41 ပြည့်တန်ဆာမှညစ်ညမ်း / မကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်သူ DDS Cabergoline, levodopa 530 500
HS11 M 45 အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖြင့် Video ညစ်ညမ်း / ပါဝင်ပတ်သက်မှု DDS Pramipexole, levodopa 200 600
HS12 M 57 အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မှု DDS, PG, BE Ropinerole 800 0
= မူးရူးစား BE; CS compulsive စျေးဝယ် =; DA dopamine agonist =; DDS dopamine dysregulation syndrome ရောဂါ =; HS = hypesexuality; ICD = ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ; PG ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း = ။
အဆိုပါလက်တွေ့အကဲဖြတ်ဘက်ထရီ Hoehn နှင့် Yahr ဇာတ်စင်သည် Unified ပါကင်ဆန်ရောဂါခဲ့သည် Rating စကေး (UPDRS), Mini-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်စာမေးပွဲနှင့်နေ့စဉ်၏တွက်ချက်မှုများမော်တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (အပိုင်း III ကို) ပါဝင်သည် l-DOPA ညီမျှထိုး (LED) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ hypersexuality နှင့်အတူ 12 လူနာရှစ် (အနည်းဆုံးအပိုဆောင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါပြဇယား 1 နှင့် 2).
အဆိုပါလေ့လာမှု Hammersmith နှင့်ဘုရင်မ Charlotte ရဲ့ဆေးရုံတွေသုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီထံမှကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Written အသိပေးသဘောတူညီခကျြဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီအားလုံးပါဝင်သူများအနေဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။
ခင်နဲ့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ပြီးနောက်သင်တန်းသားများ, သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နှင့်အမြင်အာရုံ analogue စကေး (10 စင်တီမီတာ) အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခဲ့ကြ (0 စင်တီမီတာ =0မှတ်) 'အစဉ်အဆက်နိမ့်ဆုံး' 'အကြားကျောက်ချရပ်နားနှင့်' 'အများဆုံးအစဉ်အဆက်' (10 စင်တီမီတာ = 10 မှတ်) ။ နှစ်ဦးစလုံးအကြေး Self-ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်သင်တန်းသားများကိုသာအတိတ်နာရီအတွင်းခံစားခဲ့ရပုံကိုဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ single-item ကိုအလိုဆန္ဒအကြေးခွံ (ကြာကြာ Multi-item ကိုမေးခွန်းအဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပြခဲ့ကြအနောက်နိုင်ငံများနှင့် Ussher, 2010) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ hypersexuality နှင့်အတူလူနာအများစုအပိုဆောင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်ခဲ့သည့်အတိုင်းအလားတူ Self-အစီရင်ခံဆန္ဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် scales, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာကိုလည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
နံနက်စာခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မတိုင်မီအနည်းဆုံး 11 ဇဆေးဝါးရပ်တန့်ပြီးနောက် cross-ကျော်ကျပန်းဒီဇိုင်းအတွက်ဆိတ်ကွယ်ရာ 00 ရက်ပေါင်းပါဝင်သူ (13 ဇ: 00 နှင့်718 ကြား) နှစ်ခုသီးခြားနံနက်အပေါ် scan ဖတ်ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးပါးစပ်ထိုးလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစျခုစကင်နှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအခွအေနေအတွက်လက်တွေ့ကျကျ OFF သတ်မှတ်ထားသောဆေးအခြေအနေ scan ဖတ်ခဲ့သည် lစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမစတင်မီ ၄၅ မိနစ်တွင် -DOPA / benserazide (200/50 mg) ကိုပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ UPDRS မော်တာရမှတ်များနှင့်အခြေခံအားဖြင့်မော်တာစွမ်းဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးမှုမပြုမီ (UPDRS-III မော်တာရမှတ်များတိုးတက်မှု> ၂၅% တိုးတက်မှုဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်) သည်ဆေးဝါးကိုလူနာ၏တုံ့ပြန်မှုသေချာစေရန်စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီ။ ၏အသုံးပြုမှုကို lပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူအားလုံးလူနာယခင်ကဤယူပြီးကြောင့်အားလုံးမဟုတ်တူညီ dopamine agonist အပေါ်ခဲ့ကြသည်သော်လည်း -DOPA, ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, l-DOPA ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး, hypersexuality အပြုအမူတွင်တစ်ပြိုင်တည်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည် l-DOPA ကုသမှုမပြုပဲ dopamine agonist ကုသမှု (Ballivet et al ။, 1973; ညိုသော et al ။, 1978; ခေါင်းဆောင် Hassan et al ။, 2011).
သင်တန်းသားများကိုတတ်နိုင်သမျှလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အဖြစ်အနည်းငယ်သာဧရိယာသေချာစေရန်, ဦးခေါင်းပတ်ပတ်လည်နားကြပ်နဲ့ padding ကိုအတူကင်နာအတွက်ပခုံးနှင့်လက်မောင်းနေရာချပေးခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ Scan ဖတ်တစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြနှင့် (ပြေး၏ 5.2% တုန်ခါသို့မဟုတ် dyskinesias မှမရှိစေရန်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်) အလွန်အကျွံလှုပ်ရှားမှုတွေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်စကင်ကိုဖြစ်စေပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာ volumes ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ imaging ဝယ်ယူတဲ့3T က Philips က Intera လုံးကိုယျခန်ဓာစကင်နာအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ဒေတာ T ရဲ့ 199 volumes ကိုအတူဝယ်ယူခဲ့သည်2* အလိုအလျောက် Higher-အလို့ငှာရှိန်းပြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အချပ်အထူ 3.25 မီလီမီတာနှင့်အတူအမိန့်ကျကွှအတွက် -weighted gradient ကို-ပဲ့တင်သံပဲ့တင်သံ-ပြိုပုံရိပ်; အထပ်ထပ်အချိန် 3000 ms; အချိန်ပဲ့တင်သံ 30 ms; 90 လှန်ထောင့်°; 190 ×အမြင် 219 ၏လယ်ပြင်; matrix 112 × 112) ။ အဆိုပါအချပ်ဝယ်ယူထောင့်တစ်ဦးနှင့်အတူလေ sinuses မှမရှိစေရန်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး signal ကိုကျောင်းထွက်, ကိုလျှော့ချဖို့ anterior-posterior commissure line ကနေ -30 °မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် z(မှတဆင့်-လေယာဉ်လွယ်ကူစွာထိခိုက် gradients များအတွက်လျော်ကြေးပေးရန် gradient ကိုဆုံးမပဲ့ပြင် -shimDeichmann et al ။, 2003; Goldstone et al ။, 2009) ။ တဦးတည်းက high-resolution ကို T-1အခြေခံအဆောက်အဦးစကင်ကိုလည်းစုဆောင်းခဲ့သည်ပဲ့တင်သံ (; 4.6 ms အထပ်ထပ်အချိန်လည်းရှိ၏ 9.7 ms ပဲ့တင်သံအချိန် 8 လှန်ထောင့်°; အမြင် 240 မီလီမီတာ၏လယ်ပြင်) တာဘိုလယ်ကွင်း -weighted ။
လုပ်ငန်းလည်ပတ် MRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်းအရောင်ပုံရိပ်တွေငါးအမျိုးအစားများကိုတစ်ဘလောက်ဒီဇိုင်းအတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်: (ဈ) dopaminergic မူးယစ်ဆေးတွေကို; (ii) အစားအသောက်တွေကို appetizing; (iii) ငွေကြေးနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းတွေကို; (ဃ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို; နှင့် (v) ကြားနေတွေကို။ ဆုလာဘ်-related နှင့်ကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုအများစုသည် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအပေါ်သက်ရောက်မှုရုပ်ပုံစနစ်ကနေရယူခဲ့ကြသည်lang et al ။, 2008) နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှရရှိသောလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ပုံရိပ်တွေခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဝတ်ကိုဝတ်သောသူတို့၏အသေကောင်နှင့်အတူ: တစ်ဦးကအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ရင်းနှီးသောထိထိမိမိ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု, အသည်းအသန်နမ်း, အမျိုးသမီးဒါမှမဟုတ်ယောက်ျား၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပရောပနှင့်လိုက်စားပုံရိပ်တွေ (ယောက်ျားအမျိုးသမီးမြင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားများကိုမြင်လျှင်ကျား, မအခြေပြု) အပါအဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုရှုခင်းများနှင့်သဘာဝမြင်ကွင်းများ, အိမ်ထောင်စုတ္ထုများနှင့်ကျပန်းပုံစံများပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံ System ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု (ယခင်ကအတည်ပြုခဲ့ကြခြင်းနှင့်ယခင်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI / psychophysiological လေ့လာမှုများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏သိသာထင်ရှားသောအဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်ပြခဲ့ကြBradley et al ။, 2001; Conaglen နှင့်အီဗန်, 2006; Walter et al ။, 2008).
အလားတူ resolution ဖြင့်ပုံများ 14.7 မိ9s ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုရေရှည်နှစ်ခုပြေးအတွက် 56 ့လုပ်ကွက်များတွင်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ကျပန်း image ကိုအမိန့်နဲ့ Pseudorandom ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနိုင်ရန်အတွက်ပြသတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားခြောက်လုပ်ကွက်တစ်ဦးစုစုပေါင်းနှင့်တူညီသောအမျိုးအစားကနေခုနစျပါးကွဲပြားခြားနားပုံများ, ပါရှိသော။ Run နိုင်ရန်သင်တန်းသားများနှင့်လာရောက်လည်ပတ်သူဖြတ်ပြီး counterbalanced ခဲ့သည်။ 2100 ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ '' ငါကမုန်း၏ '(တစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်ကို 4000 ms များအတွက်ပြသခဲ့ပါသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းအရာအလိုက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသူတို့သိမြင်လျှင်ပုံရိပ်တွေများ၏ဘလောက်ကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်ပါဝင်သူ 1 ထံမှ5ဖို့ဘယ်လောက်ရှိသလဲခဲ့မထွက်ရတစ် 1 ms rating ဆလိုက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ 5) 'ငါကကိုခစျြ' 'ခံရ။ ဤရွေ့ကား ratings အသံဖြင့်ရကြ၏, သူတို့ကကွန်ပျူတာတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆလိုက်နေတဲ့ fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခု 1000 ms interstimulus ကြားကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ပုံတွေကို IFIS-SA ပုံရိပ်ကိုတင်ဆက်မှု (Vivo ခုနှစ်တွင်) စနစ်နှင့် E-ချုပ်ဆော့ဖျဝဲ (စိတ်ပညာ Software များ Tools များ Inc မှ) သုံးပြီးပရိုဂျက်တာကနေပုံရိပ်တွေကိုပြသသည့်ရှစ်ရုပ်သံလိုင်းတွေကို RF ခေါင်းကိုကွိုင်အထက်တပ်ဆင်ထားမှန်ကနေတဆင့်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။
functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ပုံရိပ်အချက်အလက်များကိုစာရင်းအင်း Parametric Mapping version5(Wellcome Department of Imaging Neuroscience, UCL, UK) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်လုပ်သော MRI ပြေး၏ volumes ငါးခုသည် equilibrium သက်ရောက်မှုများကိုခွင့်ပြုရန်စွန့်ပစ်ခံထားရပြီး၊ အလုပ်လုပ်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအားလုံးသည်ပြေး၏ပထမဆုံးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုသို့ပြန်လည်နေရာချထားပြီးနောက်ရွေ့လျားမှုနှင့်အချပ်အချိန်ကုန်ဆုံးသောပြင်ဆင်မှုအတွက် volumes အားလုံး၏ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအားလုံးသည် ဦး တည်ချက်တစ်ခုစီ၌ ၂ မီလီမီတာလှုပ်ရှားမှုပါဝင်သည်။ စာရင်းအင်း Parametric Mapping ဗားရှင်း ၅ တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော TSDiffAna utility ကို အသုံးပြု၍ ကျန်ရှိသော artefacts အတွက်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေလေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သော volume တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပုံရိပ်များနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/imaging/DataDiagnostics) ။ တစ်ဦး artefact တစ်ကှဲလှဲဆူးများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲဒီဇိုင်းနှင့်အတူ uncorrelated တစ်ဦးယုတ်ပြင်းထန်မှုတစ်စက်၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကျနော်တို့အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းလိုအပ်ဆို artefacts detect မပေးခဲ့ပါဘူး။ ယုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံ T ကမှပူးတွဲမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်1 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံရိပ်ကို။ အဆိုပါပဲ့တင်သံ-ပြိုပုံရိပ်တွေထို့နောက် segment ကို T ထံမှ parameters တွေကိုသုံးပြီး Montreal အာရုံကြောဌာန Institute စံ stereotactic အာကာသသို့ပုံမှန်ခဲ့ကြသည်1 အခြေခံအဆောက်အဦးပုံရိပ်နှင့်ဝက်အများဆုံး Gaussian filter ကိုမှာ 8 မီလီမီတာ Full-width ကို အသုံးပြု. ပန်းခင်းလမ်း။
ပထမဦးစွာအဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးချင်းစီထူးခွားသညျ့အထွေထွေ linear တစ်ခုချင်းစီကိုဆုလာဘ်အခွအေနေအဘို့အမော်ဒယ်အနုတ်အခြေခံ (ကြားနေဓာတ်ပုံများကို) နှင့်လိင်အနုတ်သည်အခြားဆုလာဘ် (အခြားဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်လိင်) အတွက်ဖန်တီးထားကြသည်ရှိရာတစ်ခုတည်းပါဝင်သူအဆင့်မှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အထွေထွေ linear မော်ဒယ် (လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဘာသာပြန်ချက်သုံးခုလမ်းညွန် (ရွှေ့ပြောင်းခံရ) နှင့်လည်ပတ်သုံးခုပုဆိန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သည်အခြားစိတ်အညစ် artefacts များအတွက်စာရင်းကိုင်, ခြောက်လရွေ့လျားမှုနှင့်အနှောငျ့အယှ parameters တွေကိုထည့်သွင်းx, y, z ဘာသာပြန်ချက်နှင့် x, y, z တစ်ခုချင်းစီကိုပြေးများအတွက်လည်ပတ်) ။ ဒီအဆင့်မှာထုတ်လုပ်အကျိုးစီးပွား Contrast (ကြားနေနှိုင်းယှဉ်ဥပမာလိင်) ကဒုတိယအဆင့်, အုပ်စုတစ်စုကျပန်းသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်စာရင်းအင်းတံခါးခုံ P <0.001 ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် clox အတိုင်းအတာ 10 voxels (2 ×2×2mm) ကိုမှားယွင်းသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းကိုအသုံးပြုပြီးမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်ဆုံးမပဲ့ပြင်နှင့်အတူတပြင်လုံးကို - ဦး နှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီး activation များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် P <0.05 (Genovese et al ။, 2002) ။ နှင့် hypersexuality မရှိဘဲဦးနှောက်အတွင်းအမြင့်ဆုံး voxel activation ၏သြဒီနိတ်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် ON နှင့် OFF Scan ဖတ်ဘို့အုပ်စုအဆင့်မှာဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းရွေ့လျားမှု parameters တွေကိုအခြားတစ်ခုထက်လူနာသို့မဟုတ်ခွအေနအေအုပ်စုပိုကြီးခဲ့ကြသည်နှင့်လှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ခု (ON ဆေးဝါးနှိုင်းယှဉ် OFF) (hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှိုင်းယှဉ်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာ) အုပ်စုတစ်စု-အကြားနှင့်အကြား-အခွအေနေအပိုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေ (အုပ်စုများနှင့်အခြေအနေများအကြားကွဲပြားဘူးP > 0.1 နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်) ။
ဒေသဆိုင်ရာအဖြစ် တစ်ဦး အယူအဆ (MarsBar သုံးပြီးအကျိုးစီးပွားသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသများအဘို့အထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြ (အခြားဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်ကြားနေနှင့်လိင်နှိုင်းယှဉ်လိင် ON နှင့် OFF ဆေးဝါးအခြေအနေများအတွက်ခြားနား), အပိုဆောင်းဒုတိယအဆင့်ကျပန်းသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတည်ရှိBrett et al ။, 2002) တူညီသောစာရင်းအင်းတံခါးခုံကို (မှားယွင်းသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းနှင့်အတူ P <0.05) ။ ဤဒေသများသည် orbitofrontal cortex, anterior cingulate cortex, posterior cingulate cortex, amygdala, ventral striatum နှင့် hypothalamus ခဲ့ကြသည်။ MarsBar နှင့်အတူလိုက်ပါနေသော Automated Anatomic Labeling စာကြည့်တိုက်မှ orbitofrontal cortex၊ anterior cingulate cortex, posterior cingulate cortex နှင့် amygdala တို့၏ပုံစံများကိုယူထားသည်။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့် hypothalamus အရာဝတ္ထုမြေပုံ ANALYZE ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ် software ကို (ဗားရှင်း 8.1, Mayo ဖောင်ဒေးရှင်း) ကိုစိတ်ဝင်စားဤဒေသများဆွဲခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုအရာဝတ္ထုမြေပုံများကိုတိကျစွာပမာဏ (၁၈၅၀ မီလီမီတာ) အတွင်းနှိုင်းယှဉ်ရန်ကျန်ရှိသော ဦး နှောက်ကိုဖုံးကွယ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်3 ventral striatum နှင့် 1380 မီလီမီတာအဘို့အသီးအသီးကမ္ဘာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်း3 ) ကို hypothalamus အဘို့အသီးအသီး hemisphere ၌တည်၏။ တစ်ဦးချင်းသင်တန်းသားများကို '' ဆနျ့ကငျြဘဆေးဝါး Scan ဖတ်သည့်အမူအကျင့်ဒေတာတွေနဲ့ဆက်စပ်များအတွက်ထုတ်ယူခဲ့ကြသည် ON နှင့် OFF နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အကျိုးစီးပွားချင်းစီဒေသ၏တန်ဖိုးများ (ကြားနေနှိုင်းယှဉ်ဥပမာလိင်) ။
စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပါ Macintosh များအတွက် SPSS (ဗားရှင်း 16, SPSS Inc မှ) သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အုပျစုအတှငျးရှိနှိုင်းယှဉ် (ကြားနေနှိုင်းယှဉ် hypersexuality OFF စကင်ကိုလိင်နှင့်အတူဥပမာပါကင်ဆန်ရောဂါ) အတူတွဲထားသောသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြ t(ကြားနေ-နှိုင်းယှဉ်-ပါကင်ကြားနေနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ OFF hypersexuality နှင့်အတူဥပမာပါကင်ဆန်ရောဂါ) အုပ်စုများအကြား -tests နှင့်နှိုင်းယှဉ်နှစ်ခုနမူနာသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြ t-tests ။ အဆိုပါလက်တွေ့နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, ကှဲလှဲတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့် Gaussian Bartlett နှင့် Kolmogorov-Smirnov စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ parametric နှင့် Non-parametric စမ်းသပ်မှုသင့်လျော်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Pearson ဆက်စပ်မှုကိန်း r နှင့် Spearman ရဲ့ rho (ρ) (variable တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေမခံခဲ့ရအခါ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံတွေကိုထိတွေ့နှင့် ON နှင့် OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားနေဆနျ့ကငျြဘအဘို့အတိုးဆနျ့ကငျြဘတန်ဖိုးများတစ်ဦးချင်းစီနှစ်နိုင်ငံ BOLD ဒေသပြီးနောက်တစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရမှတ်များအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Bonferroni ဆုံးမခြင်းမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်၏ပြဿနာကိုတန်ပြန်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာသိသိသာသာပိုပြီး dopamine agonists တာနှင့်သိသာစွာလျော့နည်းခဲ့သည် lပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ -DOPA ။ အဆိုပါအုပ်စုနှစ်စုကစာရင်းအင်းအခြားလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ (အသက်, လိင်, ရောဂါကြာချိန်, UPDRS တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း III ကို OFF, ON နှင့်တုန့်ပြန်ပြီးနောက်တွင်မဆိုကွဲပြားဘူး l-DOPA, Mini-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်စာမေးပွဲနေ့စဉ် LEDစုစုပေါင်း()ဇယား 1 နှင့် 2).
အဆိုပါ OFF နှင့် ON စကင်ကိုမပြုမီ, hypersexuality နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရမှတ်များပေါ်တွင်ကွာခြားခဲ့ပါဘူးစားပွဲတင် 3) ။ အဆိုပါ OFF နှင့်သင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့ခဲ့ရှိရာ ON စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးနောက် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာစကင်ကိုရှေ့တော်၌မိမိတို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်တစ်ဦးသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်ကိုလည်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည် ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာအဆုံးစွန်သောကျန်ရှိသောအတော်လေးတည်ငြိမ်ကြိုတင်နဲ့ post scan က။ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာ (ထို OFF စကင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်အပေါ်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်ပိုမိုမြင့်မားတိုးခဲ့စားပွဲတင် 3) ။ hypersexuality နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုများနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါ ON နှင့် OFF Scan ဖတ် (Data ပြမဟုတ်) မီနှင့်အပြီးအစားအစာ, လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အလိုဆန္ဒအတွက်ဆိုအတွင်းသို့မဟုတ်အကြားအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုမပြခဲ့ပါဘူး။
PD ထိန်းချုပ်မှုလူနာများ (ဆိုလိုသည်± SE) 1.98 ± 0.59 2.25 ± 0.45 0.31a
PD HS (ဆိုလိုသည်± SE) 2.67 ± 0.56 3.70 ± 0.50 a
PD ထိန်းချုပ်မှုလူနာများ (ဆိုလိုသည်± SE) 1.32 ± 0.28 2.12 ± 0.60 0.18d
PD HS (ဆိုလိုသည်± SE) 2.01 ± 0.39 5.24 ± 0.41 a
PD ထိန်းချုပ်မှုလူနာများ (ဆိုလိုသည်± SE) 0.28 ± 0.26 0.80 ± 0.52 0.34d
PD HS (ဆိုလိုသည်± SE) 1.04 ± 0.32 3.23 ± 0.51 a
တစ်စုံ t-test ။
ဃ Wilcoxon အားလုံးစမ်းသပ်လိုက်ဖက်။
HS = hypersexuality; PD = ပါကင်ဆန်ရောဂါ။
hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာ 85.2% = အချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးမြင့် (ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာထက်သိသိသာသာပိုအလုပ်လုပ်တဲ့ MRI စဉ်အတွင်းတင်ပြလိင်အမြင်အာရုံတွေကိုကြိုက်တယ်; 3.4 ± 1.2 နှိုင်းယှဉ် 2.1 ± 0.6, SD က±ဆိုလို; P <0.05, အကန့်အသတ်မရှိ t) Welch ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူ -test, ဒါပေမယ့်မူးယစ်ဆေးဝါး, ငွေကြေးနှင့်လောင်းကစားဝိုင်း, ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်နှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်တွေကိုအဘို့မိမိတို့ ratings မခြားနားချက် (ရှိခဲ့P > 0.1 အမှု၌အားလုံး, အချည်းနှီး t) Welch ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ -test ။ ကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်နှင့် OFF Scan ဖတ်အကြားရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။
orbitofrontal cortex (လက်ဝဲ: အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဒေသ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအားကောင်းလှုပ်ရှားမှုအောက်ပါဒေသများအတွက် OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်များရှိကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့စဉ်အတွင်းပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာထက် (BOLD signal ကိုတိုးမြှင့) ဖူးကြောင်းပြသ : P <0.001, ညာဘက် - P <0.005), anterior cingulate cortex (ဘယ်ဘက်: P <0.005, ညာဘက် - P <0.001), posterior cingulate cortex (ဘယ်ဘက်: P <0.001, ညာဘက် - P <0.001), amygdala left (P <0.05), ventral striatum (ဘယ်ဘက်: P <0.05, ညာဘက် - P <0.05) နှင့် hypothalamus (ဘယ်ဘက်: P <0.005, ညာဘက် - P <0.01) (သဖန်းသီး။ 1ကို C-H ကို) ။ ယင်းအပေါ်ဆေးဝါးပြည်နယ်အတွက်တူညီတဲ့ဆနျ့ကငျြဘအဘို့, ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအလားတူ set ကိုလေ့လာတွေ့ရှိနှင့် ON နှင့် OFF Scan ဖတ်အကြားလှုပ်ရှားမှုများတွင်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ၏အုပ်စုတွင်ဆေးဝါးပြည်နယ် ON နှိုင်းယှဉ် OFF ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါကျနော်တို့ activation မကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Transverse အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူ 12 ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ် (PD) ထိန်းချုပ်မှုလူနာ (A နှင့် B) မှထိတွေ့မှုနှင့် 12 လူနာအတွက်ဆက်စပ်သိသာ BOLD signal ကိုတိုး (အဝါရောင်-အနီရောင်ဒေသများ) ဖေါ်ပြခြင်းစာရင်းအင်း parametric မြေပုံ၏ Coronal နှင့် sagittal ကဏ္ဍများ hypersexuality (PD HS) (C-H) ON နှင့် OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်များအတွင်းမှာ။ BOLD signal ကိုတိုး (များတွင်သရုပ်ဖော်ကြသည်A နှင့် B) left နှင့်ညာဘက်အလယ်ယာယီ gyrus (MTG) နှင့်အလယ်တန်း occipital gyrus (MOG) (x = -48, y = -59, z = 9), (C) ventral striatum (VS) (x = 18, y = 15, z = - 11), (D) hypothalamus (x = -5, y = -4, z = -9), (E) anterior prefrontal cortex (aPFC), anterior cingulate cortex (ACC), သာလွန် parietal lobule (SPL) နှင့် posterior cingulate cortex (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) (x = 8, y = -16, z = 33), (F) (left နှင့်ညာဘက်အလယ်ယာယီ gyrus နှင့်အလယ်တန်း occipital gyrus နှင့် prefrontal cortex anteriorx = -8, y = 56, z = 4) နှင့် (G နှင့် H) orbitofrontal cortex (OFC), သာလွန် parietal lobule, posterior cingulate cortex နှင့်လက်ဝဲဘက်နှင့်ညာဘက်အလယ်ယာယီ gyrus နှင့်အလယ်တန်း occipital gyrus (x = -24, y = 48, z = -8) ။ အရောင် bar ကိုညွှန်ပြ z-values ​​။
orbitofrontal cortex (လက်ဝဲ: အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဒေသ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအောက်ပါဒေသများအတွက် OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်များရှိအခြားဆုလာဘ်အမြင်အာရုံတွေကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းအားကောင်းလှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့ P <0.001, ညာဘက် - P <0.001), anterior cingulate cortex (လက်ဝဲ: P <0.001, ညာ P <0.001), posterior cingulate cortex (ဘယ်ဘက်: P <0.001, ညာဘက် - P <0.001), ventral striatum (ဘယ်ဘက်: P <0.001, ညာဘက် - P <0.001) နှင့် hypothalamus (ဘယ်ဘက်: P <0.001, ညာဘက် - P <0.001) ။ ON ဆေးဝါးအခြေအနေတွင်အလားတူ activation များကိုတွေ့ရှိရပြီး OFF နှင့် ON စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားမှုများမရှိပါ။
hypersexuality နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအလယ်တန်းယာယီ gyrus နှင့်အလယ်တန်း occipital gyrus (နှစ်နိုင်ငံနှစ်ခုစလုံး ON နှင့် OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်များရှိကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ကာလအတွင်းအလားတူသိသိသာသာ BOLD signal ကိုတိုးပြသခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1A နှင့် B; နောက်ဆက်တွဲဇယား 2A နှင့် C အ, နောက်ဆက်တွဲဒေတာများA နှင့် C အ) ။ အဆိုပါ OFF ပြည်နယ်အတွက်တူညီတဲ့ဆနျ့ကငျြဘအဘို့, hypersexuality နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအလားတူသိသိသာသာ BOLD signal ကို cingulate gyrus ၏ကြှနျးနှစ်နိုင်ငံလျော့ကျပြသခဲ့သည် [Brodmann ဧရိယာ (BA) 29 နှင့် 30] parahippocampal gyrus နှင့် cuneus (BA 17 ) (သဖန်းသီး။ 2A နှင့် B; နောက်ဆက်တွဲဇယား 2B နဲ့ D:, နောက်ဆက်တွဲဒေတာများB နဲ့: D) ။
Transverse နှင့် 12 ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်မှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သိသာ BOLD signal ကိုလျှောက်လျော့နည်း (မှောင်မိုက်နှင့်အလင်းအပြာဒေသများ) ဖေါ်ပြခြင်းစာရင်းအင်း parametric မြေပုံ၏ Coronal အပိုင်း (PD) ထိန်းချုပ်မှုလူနာ (A နှင့် B) နှင့် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူ 12 လူနာ (HS) တွင် (C နှင့် D) ကို OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်အတွင်းမှာ။ BOLD signal ကိုလျှောက်လျော့နည်း (များတွင်သရုပ်ဖော်ကြသည်A နှင့် B) left နှင့်ညာဘက် parahippocampal gyrus cingulate gyrus ၏ (PHG), ကြှနျး (ICG) နှင့် cuneus (x = -9, y = -47, z = 2), (C) left နှင့်ညာဘက် parahippocampal gyrus, cuneus, cingulate gyrus, insula နှင့်ညာဘက် claustrum ၏ကြှနျး (x = -42, y = 14, z = 8) နှင့် (D) left နှင့်ညာဘက် parahippocampal gyrus (x = 22, y = 38, z = -14) ။ ယင်းအပေါ်ဆေးဝါးပြည်နယ်များတွင် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူ 12 လူနာအုပ်စုထဲမှာမပါ BOLD signal ကိုလျှောက်လျော့နည်းတွေ့ရှိရသည်။ အရောင် bar ကိုညွှန်ပြ z-values ​​။
မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကျိုးစီးပွားရလဒ်များ၏ဒေသအတည်ပြုခဲ့သည်နှင့် OFF နှင့်များတွင်ဆေးဝါးပြည်နယ်များအပေါ်ကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ၏အုပ်စုတွင်အပိုဆောင်းသိသိသာသာ BOLD signal ကိုတိုးပြသခဲ့သည် အောက်ပါဒေသများ: နှစ်နိုင်ငံ anterior prefrontal cortex (BA 10) နှင့်သာလွန် parietal lobule (BA5နှင့် 7), နှင့်ယုတ်ညံ့ parietal lobule (BA 40) ၌တရားအကြာတွင် activation (သဖန်းသီး။ 1ကို C-H ကို; နောက်ဆက်တွဲဇယား 2A နှင့် C အ, နောက်ဆက်တွဲဒေတာများA နှင့် C အ) ။ အဆိုပါ OFF ပြည်နယ်အတွက်တူညီတဲ့ဆနျ့ကငျြဘအဘို့, ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာ (insula နှင့်ညာဘက် claustrum နှစ်နိုင်ငံသိသိသာသာ BOLD signal ကိုလျှောက်လျော့နည်းပြသသဖန်းသီး။ 2C နဲ့ D ကို; နောက်ဆက်တွဲဇယား 2B နဲ့ D:, နောက်ဆက်တွဲဒေတာများB နဲ့: D) ။ အဆိုပါ OFF အကြားဆေးဝါးပြည်နယ်များအပေါ် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းအဘယ်သူမျှမကွဲပြားသော BOLD signal ကိုတိုးရှိခဲ့သည်။
မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်းအခြားဆုလာဘ်အမြင်အာရုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်အကျိုးစီးပွားရလဒ်များ၏ဒေသအတည်ပြုခဲ့သည်နှင့်နှစ်နိုင်ငံ dorsolateral prefrontal cortex (BA 9) အတွက် OFF နှင့်ဆေးဝါးပြည်နယ်များအပေါ်နောက်ထပ်သိသာ BOLD signal ကိုတိုးပြသခဲ့သည် နှင့် anterior prefrontal cortex (BA 10) နှင့် parahippocampal gyrus ၌တရားအကြာတွင် activation ။
၏အကျိုးသက်ရောက်မှု lhypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာကဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် -DOPA ဆေး
ယင်းအပေါ်ဆေးဝါးပြည်နယ်အတွက် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ၏အုပ်စု, ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာအတွက် OFF ပြည်နယ်နှင့် OFF နှင့်ပြည်နယ် ON လေ့လာတွေ့ရှိသည့်လျှောက်လျော့နည်း (၏ကြှနျးအတွက်ကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း BOLD signal ကိုလျှော့ချ cingulate gyrus, parahippocampal gyrus, cuneus, insula နှင့် claustrum) (ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်နောက်ဆက်တွဲဇယား 2B နဲ့ D:, နောက်ဆက်တွဲဒေတာများB နဲ့: D) ။
ကျနော်တို့ ON နှင့် OFF ဖြစ်စေ Scan ဖတ်မသိသိသာသာအတွင်းသို့မဟုတ်အကြားအုပ်စုသည်အခြားမည်သည့်ဆုလာဘ်အခြေအနေ hypersexuality နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအနုတ်အခြေခံ (ကြားနေရုပ်ပုံများ) (ကြားနေနှိုင်းယှဉ်ဥပမာ dopaminergic မူးယစ်ဆေးတွေကို) တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ posterior cingulate cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုဆနျ့ကငျြဘ (ကြားနေနှိုင်းယှဉ်လိင်) နှင့်အတူ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအုပ်စုတစ်စု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဟာ OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်အတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံတွေကိုမှ Post-ထိတွေ့မှု, (ခုနှစ်တွင်r = 0.78, P <0.01) နှင့် ventral striatum (r = 0.80, P <0.01) (သဖန်းသီး။ 3A နှင့် B), နှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ON ဆေးဝါးပြည်နယ်အတွင်းရှိ anterior cingulate cortex အတွက် (r = 0.87, P <0.001) နှင့် medial orbitofrontal cortex (r = 0.65, P <0.05) (သဖန်းသီး။ 3C နဲ့ D:) ။ ဆက်စပ်မှု '' အကြိုက် '' နှစ်ဦးစလုံးနှင့် OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်များရှိကြားနေအမြင်အာရုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့စဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုနှင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြား hypersexuality အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ ဆက်စပ်အလိုဆန္ဒရမှတ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်အမှတ် (နှစ်ဦးစလုံးနှင့် OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်များအတွက်အဆိုပါပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုခြားနားP > အားလုံးကိစ္စများတွင် 0.1) ။
hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ Post-ထိတွေ့မှု (ထဲမှာ activation အတွက်တိုးနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်A) posterior cingulate cortex နှင့် (Bအဆိုပါ OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်နှင့် (ထဲမှာ activation အတွက်တိုးနှင့်အတူ) ventral striatumC) anterior cingulate cortex နှင့် (B) နှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပြည်နယ်အတွင်းမှာ orbitofrontal cortex medial ။
Hypersexuality ရံဖန်ရံခါကွာရှင်း, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဂုဏ်သတင်းကို၏ ruination နှင့်ပင်ဖမ်းဆီးအပါအဝင်ကြီးကျယ်သောလူမှုရေးအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopaminergic ကုသမှုတစ်ခုအတော်လေးဘုံမလိုချင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ် hypersexuality ကိုကျောထောက်နောက်ခံယန္တရားများစူးစမ်းဖို့ရည်ရွယ်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အမူအကျင့်အကဲဖြတ်အသုံးပြုအမြင်အာရုံတွေကိုအဖြစ် (mass ကိုမီဒီယာများက projected သူတို့အားအလားတူ) လိင်၏ဘုံပုံဖော်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦး functional MRI ပါရာဒိုင်းကိုသုံး, ကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုထိတွေ့နှင့်အတူလူနာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ဒေသများသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါ (ကြည့်ရှု စားပွဲတင်4) ရလဒ်များအကျဉ်းချုပ်ပါ။
ယင်းအပေါ်နှင့် OFF ဆေးဝါးပြည်နယ်များအတွက် hypersexuality နှင့်မရှိဘဲပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ဒေသဆိုင်ရာ BOLD signal ကိုတိုးနှင့်လျှောက်လျော့နည်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဆင်တူရိုးမှားဖေါ်ပြခြင်းရလဒ်အနှစ်ချုပ်
OFF နှင့်တိုး ON
OFF နှင့်လျှောက်လျော့နည်း ON
အလယျပိုငျးယာယီ gyrus cingulate gyrus ၏ Isthmus အလယျပိုငျးယာယီ gyrus cingulate gyrus ၏ Isthmus
အလယျပိုငျး occipital gyrus Parahippocampal gyrus အလယျပိုငျး occipital gyrus Parahippocampal gyrus
cingulate cortex Posterior
သာလွန် parietal lobule
ယုတ်ညံ့ parietal lobule
ကျန်းမာတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ (ထဲမှာအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ထဲမှာRedouté et al ။, 2000; Arnow et al ။, 2002; Walter et al ။, 2008), ထိုကဲ့သို့သောအလယ်မှာ occipital gyrus နှင့် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်အတူလူနာများ၏အုပ်စုများအတွက်အလယ်တန်းယာယီ gyrus အဖြစ် parieto-ယာယီ-occipital အမြင်အာရုံအပြောင်းအလဲနဲ့ဒေသများ activated အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့။ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာများတွင်နှစ်ဦးစလုံးနှင့် OFF ဆေးဝါးအခြေအနေများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံတွေကိုထိတွေ့သည့် orbitofrontal cortex အတွက်တိုးမြှင့် activation, anterior cingulate cortex, posterior cingulate cortex, ventral striatum, anterior prefrontal cortex, သာလွန် parietal lobule, amygdala ပြ အဆိုပါပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် hypothalamus ။ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့အောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသိသိသာသာတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်ပြသခဲ့သည်။ သူတို့ ON ခဲ့ကြသည့်အခါမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကပိုတိုးလာခဲ့သည် l-DOPA လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့ပြီးနောက် OFF ဆေးဝါးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက် anterior cingulate cortex ၏အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ, posterior cingulate cortex, ventral striatum နှင့် orbitofrontal cortex တိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်း, ဤဒေသများတွင် activation တိုးမြှင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်မျဉ်းသားခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမဆက်စပ်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ '' အကြိုက် '' ရမှတ်များအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများပြုလုပ် dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်နှင့် ventral striatum, hypothalamus, medial prefrontal cortex, amygdala နှင့် anterior cingulate cortex အပါအဝင်ဒေသများရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအားဖြင့်အစပျိုးတိုက်တွန်းပြသနှင့် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့စစ်အစိုးရကိုပုံကြီးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်စားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောပါပြီ နှင့် Predator (Fiorino နှင့် Phillips က, 1999; Nocjar နှင့် Panksepp, 2002; Afonso et al ။, 2009; Pfaus, 2010; Stolzenberg နှင့် Numan, 2011) ။ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းပါအတွေ့အကြုံကို (compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်Frohmader et al ။, 2011), dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကုသမှုအောက်ပါပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် hypersexuality များ၏နှောင့်နှေးစတင်ခြင်း mirroring (Giladi et al ။, 2007) ။ ထို့အပြင်လတ်တလောအလုပ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထပ်တူသည့် hypothalamus နှင့် anterior cingulate cortex (အပါအဝင်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေအတူတစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အဖြစ်အတူတူပင်အာရုံခံစနစ်များကိုသက်ဝင်နိုင်သောပြသခဲ့သည်Frohmader et al ။, 2010) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ယခင်တိရိစ္ဆာန်အလုပ်အတူခေါ်ဆောင်သွားပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေးသွေးဆောင် hypersexuality ၏ယန္တရားများကိုနားလည်များအတွက်မူဘောင်အဖြစ်မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီကိုထောကျပံ့။ အဆိုပါမက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ dopamine, (ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံတွေကိုကဲ့သို့) လှုံ့ဆော်မှု-related ဆုချဖို့မက်လုံးပေး salience attributing အားဖြင့်ဆုလာဘ်များလိုက်စားလှုံ့ဆျောလိင်လိုက်ရှာ ( 'လို') ထွက်လာပါတယ်နှင့် hypersexuality ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, လိင်တွေကိုစွပ်စွဲခံရစေခြင်းငှါရရှိထားသူ (ရောဂါဗေဒမက်လုံးပေး salience နှင့်အတူBerridge et al ။, 2009) ။ မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီနောက်ထပ် (တစ်ဦးချင်းရှာကြံ compulsive ဆုလာဘ်ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ် '' like နှိပ် '' ventral striatum dopamine-related neurocircuitry ကကမကထပြုခဲ့ဆုလာဘ်, လွတ်လပ်စွာဆုလာဘ်များအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးပွားမည်အကြောင်းအဘို့ '' လို '' ကြောင်းရရှိထားသူBerridge et al ။, 2009), နှင့်က dopamine () '' လို '' cue-evoked လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးလာပေမယ့် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏ '' အကြိုက် '' rated မဤနေရာတွင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအများစု (8 ၏ 12) အနည်းဆုံးအပိုဆောင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ (စသည်တို့ကိုဥပမာရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, Bing စား) ခဲ့သည့်အတိုင်း, ငါတို့အမူအကျင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဆုလာဘ်အောက်ပါရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့လိုခငျြ cue ထိတွေ့လိင်မှတိကျတဲ့သို့မဟုတ်အခြားဆုလာဘ်မှတိုးချဲ့ခဲ့ကြသည်။ လောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် self-သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အလိုဆန္ဒနှင့်တူ, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစာ ON နှင့် OFF Scan ဖတ်မီနှင့်အပြီး hypersexuality နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ၏အုပ်စုများအတွင်းသို့မဟုတ်အကြားကွဲပြားခြားနားသောကြဘူး။ အလားတူပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်ရလဒ်များကိုလည်း hypersexuality မှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြသည့်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအခြားကြိုးအမြင်အာရုံတွေကိုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက် hypersexuality နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအကြားမည်သည့်ခြားနားချက်များကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ငါတို့သည်လည်းသည်အခြားဆုလာဘ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံတွေကိုနှင့် ပတ်သက်. တိကျသောဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုစူးစမ်းချင်တယ်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်တွင်ဤဒေသများ၏တိကျသောအရေးပါမှုကိုအတည်ပြုခြင်း, orbitofrontal cortex, anterior cingulate cortex, posterior cingulate cortex, ventral striatum, anterior prefrontal cortex, dorsolateral prefrontal cortex, parahippocampal gyrus နှင့် hypothalamus အတွက်နှစ်ဦးစလုံးနှင့် OFF ပြည်နယ် Scan ဖတ်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ activation ထင်ရှား အနည်းဆုံးအား hypersexuality များ၏အခြေအနေတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အလိုဆန္ဒ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအဘို့ဤရွေးချယ်တိုးမြှင့်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Berridge နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (အားဖြင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များမှာအလုပ်မလုပ်Mahler နှင့် Berridge, 2009, 2012; DiFeliceantonio နှင့် Berridge, 2012) က amygdala နှင့် striatum အတွက် opioid circuitry လှုံ့ဆော်ဖို့ဖက်ရှင်တစ်ဦး-ယူ-အားလုံးဆုရှင်အတွက်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းစွာ '' လို '' cue-ဖြစ်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်မပြသခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်တစ်ခုတည်းအကြိုက်ဆုံးဆုလာဘ် cue သူ့ဟာသူအားလုံးကိုဆွဲဆောင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့တစ်အလွန်အမင်းအစွမ်းထက် '' စိတ်ခွန်အားနိုးသံလိုက် '' ဖြစ်လာအခြားဆုလာဘ်တွေကိုကုန်ကျစရိတ်မှာတောင်မှတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုလည်းသူများကအခြားဆုလာဘ် (ရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့Mahler နှင့် Berridge, 2009, 2012; DiFeliceantonio နှင့် Berridge, 2012) ။ အလားတူပဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တွေကို hypersexuality နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်နဲ့အခြားဆုလာဘ်တွေကိုမှပိုကောင်း amygdala လှုပ်ရှားမှုဆွေမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ရွေးချယ်တောင်မှ Co-နေကြလို့ပဲသူတို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ဦး '' ဆုရှင်-ယူ-အားလုံးထုံးစံ '၌တိုးမြှင်မက်လုံးပေး salience နှင့်အတူပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြပေမည် ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်။
အဆိုပါ ventral striatum အတွက်တိုးမြှင့်တက်ကြွစွာ ventral striatum (တိုးပွားလာ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်Schott et al ။, 2008(ပေဒေတာနှင့်အတူ), တသမတ်တည်းO'Sullivan et al ။, 2011) နှင့်ထိခိုက်တိရိစ္ဆာန်များ၏ ventral striatum အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုနှင့်ဆက်စပ်သောတိုးလာ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများ (Fiorino နှင့် Phillips က, 1999) ။ အဆိုပါ hypothalamus နှင့် amygdala အတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအယှက်မှလူသိများနှင့် hypothalamic နှင့် amygdala activation အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှုများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထခြေရာခံနေကြတယ်Hamann et al ။, 2004) ။ အဆိုပါ hypothalamus (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှပြသခဲ့ပြီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ component တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုယုံကြည်Allen က et al ။, 1989; Kupfermann et al ။, 1991; Meisel နှင့် Sachs, 1994; Georgiadis et al ။, 2010).
အဆိုပါ anterior cingulate cortex (ဒေသများတွင် forebrain ချိတ်ဆက်ထားသောအခြား paralimbic ဧရိယာသည်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် neuroendocrine လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများစွာထိန်းချုပ်ထားStoléru et al ။, 1999) ။ ယခင်လေ့လာမှုများ (penile tumescence ၏ဒီဂရီနှင့်အတူ anterior cingulate cortex ၏ activation ချိတ်ဆက်ပါပြီRedouté et al ။, 2000) နှင့်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အလိုဆန္ဒ၏စိတ်ခွန်အားနိုး component တစ်ခုနှင့်အတူ (Redouté et al ။, 2000; Arnow et al ။, 2002; Karama et al ။, 2002; Walter et al ။, 2008) ။ Parietal ဒေသများနှင့် posterior cingulate cortex လည်း (ဆုလာဘ်အလိုဆန္ဒအတွက်တိကျတဲ့ Cue ချိတ်ဆက်ပြီGaravan et al ။, 2000) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex (မျှော်လင့်အပျော်အပါးနှင့်အလိုဆန္ဒ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ratings ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်, ထိုသို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံကိုဖြန်ဖြေတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဟုယုံကြည်နေသည်Kringelbach, 2005) ။ ထို့ပြင် orbitofrontal cortex နဲ့ prefrontal cortex ၏ activation (ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းလိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်းကိုယ်စားပြုခံရသာယာသောကိုယ်ထင်ရှားအာရုံခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့အကြံပြုထားသည်Stoléru et al ။, 2003) ။ ကျနော်တို့မက်လုံးပေး salience တိုက်ရိုက်သတိအသိအမြင်အတွေ့အကြုံမပါ '' လို '' သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီစေခြင်းငှါအရာ, rated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ ventral striatum အပြင် (anterior cingulate cortex နဲ့ orbitofrontal cortex အပါအဝင်) cortical ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိနှင့် အကြောင်း, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသတိ (ventral striatum ရလဒ်များ၏အပိုဆောင်း cortical အပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်ပါတယ် '' လို ''Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1995).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့ပြီးနောက်ပိုကောင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုများ၏အုပ်ချုပ်ရေးကလွှမ်းမိုးမခံခဲ့ရ lယင်းအပေါ်နှင့် OFF ဆေးဝါး Scan ဖတ်အတွက်အလားတူ BOLD signal ကိုတိုးတို့ကအကြံပြုအဖြစ် -DOPA ။ သို့သော်တစ်ဦးစူးရှခြင်း, မရှိခြင်း l(hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ၏အုပ်စုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသည် '' လို '' -DOPA အကျိုးသက်ရောက်မှု mesolimbic dopamine ပြည်နယ်၏များ၏ညှိနှိုင်းအပြန်အလှန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပပျောက်မလှုံ့ဆော်ဖို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရှေ့မှောက်တွင်တိုးမြှင့်Berridge, 2012; Oei et al ။, 2012) ။ အဆိုပါ hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာပင် OFF ပြည်နယ်အတွက်လုံးဝမူးယစ်ဆေး-အခမဲ့မဟုတ်ယူဆရထိခိုက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်စူးရှသောစိတ်ကြွဆေးအရေးကြီးတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများထို့အပြင်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့် (Tindell et al ။, 2005), ယခင်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ာင်း (sensitized ကြွက်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-အခမဲ့ပြည်နယ်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပင်လျှင်, မိမိတို့၏ဆက်စပ်ဆုလာဘ်များအလွန်အကျွံလိုက်စားဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆုလာဘ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေWyvell နှင့် Berridge, 2001).
စိတ်ဝင်စားစရာစူးရှပြီးနောက် hypersexuality နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ၏အုပ်စု l-DOPA စိန်ခေါ်မှု, ပါကင်ဆန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလူနာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေး OFF နှင့် OFF နှင့်ပြည်နယ် ON လေ့လာတွေ့ရှိသည့်လျှောက်လျော့နည်း (cingulate gyrus ၏ကြှနျးအတွက်ကြားနေအမြင်အာရုံတွေကို, parahippocampal gyrus, cuneus, insula နှင့် claustrum နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း BOLD signal ကိုလျှော့ချ) ကြည့်မြင်ကင်းစွဲအတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် (ဖျက်သိမ်းခဲ့သည် Volkow et al ။, 2010) ။ ဤရလဒ်သည် dopamine မူးယစ်ဆေးဝါးများ hypersexuality ဆွတားစီးဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအရာကဦးနှောက်ဒေသများ၏ Deactivate ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ က activated voxels (ထဲမှာ BOLD signal ကိုတိုးမြှင်သို့မဟုတ်လျှောက်လျော့နည်းသို့အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သို့မဟုတ်တားစီးဘာသာပြန်ဆိုရန်ခက်ခဲပေမဲ့Georgopoulos et al ။, 1982; Batini et al ။, 1984), dopamine မူးယစ်ဆေးဝါးနှောက် cortex အတွက်ဒေသခံအာရုံခံဆားကစ်အတွင်းသရုပ်ဆောင် inhibitory interneurons များ၏လှုပ်ရှားမှုမှတဆင့်ဒီတားစီးဖြန့်ချိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူနာကသူတို့ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများပေါ်မှာဤလေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့တစ်ပြိုင်တည်းပါအပြုအမူဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည့်အခါ cingulate gyrus, parahippocampal gyrus, cuneus, insula နှင့် claustrum ၏ကြှနျးအတွက်အာရုံခံတားစီးများလွှတ်ပေးရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရမှတ်တစ်ခုဆက်စပ်တိုးခဲ့သည်။ ဒါကသီအိုရီ (dopamine အဲဒီ receptor agonist ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက် hypersexuality ၏ပြီးပြည့်စုံသောချုပ်ရာကထောက်ခံနေသည်Mamikonyan et al ။, 2008; Munhoz et al ။, 2009).
dopamine မူးယစ်ဆေးဝါးများမှတဆင့် insula ၏ Deactivate ၏တားစီး (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများတွင်ဤ paralimbic ဧရိယာပုံစံများဆက်သွယ်မှုအဖြစ်, ရောဂါဗေဒလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်Oppenheimer et al ။, 1992), (စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များနှင့်အတူမြင့်မားလုပ်ငန်းများ၌အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်ပြောပြတယ်Stoléru et al ။, 1999) နှင့်ယင်းအလယ်တန်း somatosensory cortex နဲ့ပေါင်းပြီး, (ပေးခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဖော်ပြနိုင်ရန်ရိပ်မိတတ်ပြီးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့အစီရင်ခံထားသည်Mouras et al ။, 2003) ။ အဆိုပါ claustrum လည်း (တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ကိုပြသထားသည်Hamamura et al ။, 1997) နှင့်လူသားမြားသညျ (Reiman et al ။, 1989) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့စဉ်းစားနေပါတယ် (Rees et al ။, 2007) ။ parahippocampal ဒေသများတွင် Deactivate လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယို၏တင်ဆက်မှုသည်အောက်ပါအစီရင်ခံထားတော်မူပြီ သို့သော်ဤ Deactivate ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍကောင်းစွာ (နားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်Redouté et al ။, 2000).
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် hypersexuality ကိုကျောထောက်နောက်ခံယန္တရားများဆနျးစစျဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပြီး, တွေ့ရှိချက်များကိုပုံကြီးချဲ့ cue-ဖြစ်ပေါ်မက်လုံးပေး salience-based လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်အခြေခံပြီးအကောင့်တစ်ခုမှထောက်ခံမှုချေးငှားရမည်။ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာမှဝင်ရောက်ခွင့်ကနေတဆင့် cue-ထိတွေ့မှု၏အလားအလာမှလေးစားမှုနှင့်အတူအချို့သောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ hypersexuality မှကျရောက်နေတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ၏ဘုံခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုအားဖြင့် stimulation အလားအလာလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်နိုင်သည့်နှောက် cortex ၏တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းသွား Active မှတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဆုလာဘ်ရှာကြံများအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးတွန်းအားပေးနိုင်သည်။ ခေါ်ဆောင်သွားအမြင်အာရုံတွေကိုထိတွေ့၏အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်အပေါ်ကန့်သတ်များ၏လျှောက်လွှာထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလက်ခံရရှိရှိသူများအဖြစ်အားနည်းချက်လူဦးရေအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလွန်အကျွံသို့မဟုတ် deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစတင်ခြင်းကန့်သတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုပါကင်ဖွင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ (J-0704) မှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကထောက်ခံခဲ့သည်။
နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်း မှာရရှိနိုင် ဦးနှောက်ကို အွန်လိုင်း။